Vivaldi ikozvino iri default browser mu Manjaro Cinnamon | Linux Vakapindwa muropa
Imwe nyaya diki yeFirefox: Vivaldi parizvino iri bhurawuza rekumira mune yeManjaro Cinnamon nharaunda yenharaunda
Last april isu takanyora chinyorwa chinotaura nezve zvese zvaungaite Vivaldi yevashandisi vanonyanya kuda. Ini ndakatanga kuishandisa nekuti ndaida zvinhu zvisina kupiwa neFirefox, uye ndazopedzisira ndaishandisa nekumisikidza pane chero komputa / sisitimu yekushandisa painowanikwa. Nhasi, CEO weVivaldi Techonologies akaburitsa nhau nezve mumwe munhu akaita zvakafanana neni, asi asiri munhu.
Manjaro kugoverwa kunoenderana neArch Linux nefilosofi kana chinangwa chekuita kuti zvinhu zvive nyore kune wepakati mushandisi uyo anowedzerawo ayo kugadzirisa, senge chitoro kana Pamac software maneja. Iyo purojekiti inoburitsa matatu epamutemo shanduro, iyo Xfce inova iyo huru flavour, iyo KDE uye iyo GNOME. Kunze kwezvo, iyo nharaunda inotangisa vamwe, se i3, MATE kana Budgie, asi iyo yanga iri pamiromo yemunhu wese kwanhasi ndiyo "sinamoni" edition.
Manjaro Cinnamon inotsiva Firefox neVivaldi nekutadza
Nezuro, Vivaldi ainyora pasocial media kuti vachakurumidza kuzivisa chimwe chinhu chakakosha. Chinhu chakashata chemushandisi seni, anoshandisa Manjaro KDE kana i3, ndechekuti hachisi chinhu chebrowser yacho pachayo, asi ikozvino ndiyo ichave iyo iyo Manjaro yakaiswa nekutadza Cinnamon. Vivaldi anga achishanda nevachengeti veiyi vhezheni kuti zvinhu zvese zvikwane zvakakwana, uye nekuda kweizvi ivo vakagadzira, pakati pezvimwe zvinhu, dingindira rinodaidzwa kuti Manjaro-Cinnamon yandinofungidzira kuti ichave yakasarudzika kumubatanidzwa uyu pakati pehurongwa newebhu browser.
Chasara chinyorwa rakabudiswa naJon von Tetzchner anotarisa pane bhurawuza rako, pane zvese zvinoita kuti zvive zvakasarudzika, achisimbisa kuti ndizvo yakanyatsogadziriswa uye inoremekedza zvakavanzika, kunyangwe Firefox inomirawo mune yekupedzisira. Uye, semune zvakawanda zvekuparadzirwa kweLinux, bhurawuza reMozilla rakaiswa nekumisikidza muManjaro Cinnamon, uye idzi inyaya dzakaipisisa kwavari kubvira, kunyangwe ini ndaisazobheja pazviri, mukana wekutanga kuchinja kwevakawanda.
Uye hatigoni kutadza kutaura Firefox munhau idzi, nekuti varasikirwa uye ivo vanoramba vachirasikirwa nevashandisi zuva rega rega rinopfuura. Chero ivo vanoisa pfungwa pakuvandudza bhurawuza ravo zvakanyanya kana isu tichaona zvinoitika nazvo. Chokwadi ndechekuti vamwe, pamwe vazhinji, vevashandisi veManjaro Cinnamon vanozoshandukira kuVivaldi, iyo semushandisi webrowser yeakare-CEO weOpera ini handingashamiswe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Imwe nyaya diki yeFirefox: Vivaldi parizvino iri bhurawuza rekumira mune yeManjaro Cinnamon nharaunda yenharaunda
Izvo zvinogara zviri nhau dzinotyisa kuti dzinotsiva mahara software neproprietary software.
Hakuna kupi munhau pazvinotaurwa asi iwe unogona kuzvijekesa: "Manjaro inotsiva browser yaro yakavhurika sosi neyakavanzika."
Ndidzo nhau chaidzo.
Pindura kune asina zita
Ini ndinoda vivaldi, asi ini ndinoshandisa seyechipiri browser, kwete iro hombe
Mhosva iri pakati peSCO neIBM yekutyora kodzero mukodhi yeUNIX / Linux iri mukugadzirisa kusarura